ESTA AMERICA ANTANANARIVO - ESTAmerica US ESTA E-Filing Travel Services
Ny programa ESTA Visa Waiver
Alefaso ireo asa fanompoana FIFANEKENA
FOMBA FIASA MIKASIKA NY ELECTRONIC SYSTEM
NEW APPLICATION MIEZAHA HANAMPY ANTSIKA
Mila fanampiana atomboka?
E-FILY VAOVAO VAOVAO VAOVAO
Ireo mpifindra monina iraisam-pirenena izay te-hivezivezy any Etazonia noho ny programa Visa Waiver dia mila mangataka fahazoan-dàlana.
Olom-pirenena azo zaraina na tompondaka:
Olon-tsotra na tompon'andraikitra amin'ny firenena Programan'ny Visa Waiver ianao.
Ny dianao dia mandritra ny andro 90 na latsaka.
Miezaka ny hivezivezy any Etazonia ianao mba hanao raharaham-barotra na fahafinaretana.
Tsy manana visa mpitsidika ianao amin'izao fotoana izao.
Ilaina ny fampahalalam-baovao:
Fandevenana ara-dalàna avy amin'ny firenena Programan'ny Visa Waiver
Valisoa maimaim-poana (MasterCard, VISA, American Express, ary Discover mba handoavana ny $ 89 isaky ny fangatahana fangatahana.
Ny fampahalalana momba ny fifandraisana. (Anarana, laharan-telefaona, adiresy mailaka, ary adiresy mailaka)
Adiresy sy fifampiresahana momba ny fijanonanao.
Nanazava ny fampiharana ESTA
Inona no mila ampiharina amin'ny ESTA?
Ilainao ny pasipaoronao sy ny karamanao handoavana ny fangatahana. Ny dian-tongotrao dia tsy maintsy atao an-tsoratra nefa azo ampidinina. Azafady avereno ny FAQ momba ny fanontaniana sy valiny mahazatra momba anao Esta status
Fe-potoana natao ho an'ny fampiharana ESTA. ,
Ny fandoavam-bola rehetra ho an'ny fampiharana ESTA dia tsy maintsy atao amin'ny carte de crédit na debit. Ny governemanta Amerikana dia tsy mahafa-po afa tsy fanamarinana na volavolan-dalàna ho an'ny fampiharana ESTA, ary mamela azy ho an'ny orinasa manokana toy ny ESTAmerica.org mba hanampy amin'ny "Rafitra elektronika ho an'ny zotra momba ny fizahan-tany"Dingana. Manaiky ireo marika karatra lehibe rehetra izahay. Azafady mba mifandraisa aminay raha tsy afaka manao ny karamanao miaraka amin'ny carte de crédit, fa ny fomba tsotra indrindra dia amin'ny carte de crédit na debit.
Hamarino ny fampiharana ESTA anao
Mila manavao, manamarina na manavao ny ESTA ianao?
Tsy misy afa-tsy saha sasantsasany izay azo havaozina amin'ny ESTA aorian'ny nahazoanao fankatoavana an-dàlana. Nasaina nijery akaiky ny ESTA ianao mialoha ny fitsidihanao any Etazonia mba hanome fotoana anao raha misy fahadisoana amin'ny fampiharana anao. Raha manana fanontanina momba anao ianao, azafady mailaka aminay.
Misy ve ny Visa sy ny ESTA?
Ny fahazoan-dàlana ESTA dia tsy fahazoan-dàlana. Fahalalahana mivezivezy eo ambany fitarihan'ny VWP, izay natao hamelana ireo mpandeha handalo ny fizotry ny visa. The ESTA fahazoan-dàlana dia tsy mitovy amin'ny visa amerikana amin'ny fomba rehetra, ary tsy mety hosoloina visa amin'ny toe-javatra izay takiana ny fahazoan-dàlana hivezivezy. Tsy mila ESTA raha efa manana visa manan-kery ianao.
ESTA sy ny VWP Information
Ny fampiharana ESTA dia atao anaty aterineto.
Ny antsipirian'ny fangatahana an-tsoratra dia misy ny fampahalalana amin'ny pasipaoro sy fandoavam Ny làlam-pifindrazanao dia safidy ary azo havaozina aoriana. Ireo saha tsy maintsy atao rehetra dia tokony hofenoina ary vita tanteraka. Ny Etazonia dia tsy mandray andraikitra na amn-bola amin'ny fangatahana ESTA. Alefaso amin'ny orinasa toy ny ESTAmerica.org hanampy sy hanampy ny olom-pirenena avy ao amin'ny firenenao hameno ny taratasy mazava tsara.
Iza no tokony hampiharina amin'ny ESTA?
Izay miditra ao Etazonia eo ambanin'ny Programan'ny Visa Waiver. Izany dia ahafahan'ny Departemantan'ny fiarovam-pirenena hifehy ny Visa Waiver Travelers alohan'ny handaozany ny fireneny. Misafidiana fotsiny Ny firenena dia Visa Waiver Countries, ary hahita izany lisitra izany ao amin'ny pejin'ny The (VWC).
Ny mpandeha rehetra avy amin'ny firenena Visa Waiver dia afaka mihatra
Ny ESTA dia azo omena amin'ny aterineto
Ilaina latsaky ny 10 minitra ny famenoana ny fangatahana
72 ora ora fanodinana na latsaky ny ora
Hamantatra ny fampiharana ESTA
Amboary ny adiresy fonenana any Etazonia
Amboary ny adiresy mailaka ampiasaina amin'ny fampiharana ESTA
Hamarino ny fampiharana ny Esta
Avereno jerena ny daty nahaterahanao ESTA
Hamarino ny antsipirihanao momba ny fampiasana ESTA tsara alohan'ny diany
Avereno jerena ny tsipirian'ny pasipaoronao ankehitriny
Hamafiso ny angon-drakitra vaovao, raha ilaina
10 Fampiharana minitra
24 / 7 Customer Support. Singam-bolo amin'ny Specialist Travel Support Specialist androany.
Raha toa ka tsy ankatoavina ny fampiharana ny Travel, dia manolotra vola 100% ho vola antoka.
Lohahevitra mifandraika amin'izany:
Iza no nahazo lalana mba hivezivezy any Etazonia?
Hitsidika ireo olon-tianao, sa hody any Etazonia? Tsy maintsy mahazo ny fanomezan-dalana manokana avy amin'ny Governemantan'i Etazonia alohan'ny hidirana ao amin'ny firenena ianao. Ny tranga sasantsasany, midika ho fangatahana visa fa raha olom-pirenena iray ao amin'ny Visa Waiver Program (VWP) ianao, amin'ny fampiasana ny Electronic System for Travel Authorization (ESTA) dia mety ho mora kokoa sy haingana kokoa ny safidy. Ny VWP dia ahafahan'ny olom-pirenen'ny firenena 38 mahazo alalana mankany Etazonia amin'ny alàlan'ny Departemanta Amerikana misahana ny fiarovana ny zon'olombelona tsy nahazo fahazoan-dàlana avy amin'ny visa. Raha olom-pirenana avy any amin'ny firenena mandray anjara ianao ary manana pasipaitra mendrika, dia mila ampiharina amin'ny endrika ESTA ianao. Raha mahafeno fepetra ianao dia hanana fanomezan-dàlana hivezivezena any Etazonia mandritra ny andro 90. Raha mandeha mivezivezy any Etazonia ianao dia mankany amin'ny firenena hafa, mbola mila mangataka fangatahana ESTA ianao.
Visa Application Vs. Fampiharana ESTA.
Ny fepetra ESTA ao amin'ny Programa Visa Waiver (VWP) dia tsy dia mitaky loatra raha oharina amin'ny fampiharana elektronika tsy misy mpifindra monina. Ny fangatahana Visa dia mitaky fotoana iray na ora maromaro mba hamenoana ny fampahalalana momba ny dia sy ny tantara momba ny tenanao. Vs. Ny fampiharana ESTA dia mikasika ny 10 minitra.
Fepetra fampidiran-draharaha rehefa ampiharina amin'ny ESTA
Amin'ny fampiharana ny ESTA, dia ampiasaina ny mahita ireo olon-tiany, ny fialantsasatra, ny fitsidihan'ny dokotera, ary ny mety ho an'ny ankamaroan'ny dia atao any Etazonia. Misy ny tanjon'ny saran-dàlana sasantsasany, ary ny hafa dia mila fangatahana Visa feno.
Tourisme, Camping, ary Site Seeing
Sehatr'ireo Park Amusements
Ny fitsidihana ireo olon-tiana na namana
Manatrika ny oniversite alohan'ny hanaovana fangatahana Visa hanatrehana
Fitsaboana sy dokotera fitsidihana
Fihetsiketsehana ara-tsosialy, Konferansa, na fihaonana an-tariby
Mandraisa anjara amin'ny play, mozika, fanatanjahantena, na karazana fifaninanana hafa na zava-nitranga hafa, (Tsy azo atao ny mandray anjara)!
Fiverenan'ny raharaham-barotra sy ny fivarotana asa
Mandray anjara amin'ny fanabeazana, fivoriambe matihanina, na karazana fivoriambe. Ohatra: Comic Con
Fampiofanana momba ny fiasa tetezamita (Tsy azo ampiasaina amin'ny loharanom-baovao any Etazonia raha tsy misy ny fandaniana amin'ny fijanonanao)!
Ny fangatahana Visa dia ilaina amin'ny fandehanana any Etazonia any Etazonia raha:
Asa fitantanam-potoana feno
Fianarana ambony, College, na College College
Mpanao gazety vahiny, mpanao gazety, sarimihetsika, radio na fampahalalam-baovao hafa
Mitadiava fonenana maharitra any Etazonia
Mila ny ESTA ve ianao mba hivezivezy any Etazonia?
Raha toa ka mandroso ny olom-pirenena tsy misy Amerikana transit through ny Etazonia, mety mitaky fampitaovana marina izy C-1 visa, raha tsy hoe olom-pirenena ao amin'ny firenena misy fifanarahana izy Etazonia mamela ny olom-pireneny hizotra mankany amin'ny Etazonia tsy misy visa ho .
Mila visa ve aho hampifandray ny sidina any Etazonia?
Etazonia Ny Departemantan'ny Sekoly Homeland Security dia mitaky Visa Fandaharana Programan'ny Waiver (VWP) hahazoana ny fankatoavana avy amin'ny Rafitra Elektronika ho an'ny Famerenana ny Travel (ESTA) farafahakeliny 72 ora alohan'ny hidirana hoan'ny Ny fiaramanidina mankany Etazonia na ny fifandraisana amin'ny US An ITA dia takiana.
Mila visa ve aho raha toa ka manana tiana halefa any Etazonia?
Fitaterana mivantana sy tsy miato dia midika fa ny dianao ho any amin'ny toerana farany misy anao dia ahitana a layover any Etazonia ary tsy maintsy mijanona any ianao fa tsy manana tombontsoa hafa. ... Na izany aza, raha manana B-1 na B-2 visa ho an'i Etazonia ianao, ary tsy maintsy mivezivezy any amin'ny firenena ianao, tsy mila visa C ianao.
Iza amin'ireo firenena ireo no mila ETA Pasipaotra Eports?
Mety hijanona mandritra ny andro 90 ny mpitsidika any Etazonia izay koa dia ahitana ny fotoana laniny any Kanada, Meksika, Bermudes, na ireo nosy any Karaiba raha ny fahatongavan'i Etazonia. Ny ESTA dia takiana raha tonga amin'ny seranam-piaramanidina na sambo. Ny Visa Waiver dia mihatra tsy misy ESTA sisin-tany, fa ny VWP dia tsy mihatra mihitsy (izany hoe misy fahazoan-dàlana iray) raha misy mpandeha iray tonga amin'ny alalan'ny rivotra na ranomasina amin'ny mpamatsy tsy misy fankatoavana.
Hatramin'ny 2016, ny Tsy misy fangatahana fahazoan-dàlana raha toa ka efa nisy olona taloha nandeha tany Iran, Iraka, Libya, Somalia, Sodàna, Syria, na Yemen na na aorian'ny March 1, 2011 na ho an'ireo olom-pirenena roa ao Iran, Irak, Sodàna na Siria. Ny sokajy sasany toy ny diplomaty, miaramila, mpanao gazety, mpiasa an-tsitrapo na mpandraharaha ara-dalàna dia mety manana ny fepetra takin'ny visa nomen'ny Sekreteran'ny Homeland Security.
Firenena nomeny & Roadmap.
Ireo firenena hotendrena ho amin'ny toeran'ny Visa Waiver Program dia eo anelanelan'ny "sarintanin'ny lalan-kaleha" ary ny fahazoana mandray anjara. Ny fanendrena dia manomboka ny fanombanana amin'ny antsipirihany amin'ny Depatman Security United States ny fiarovana ny tanindrazan'ny firenena sy ny fomba fifindra-monina. Tsy misy fepetra voafaritra ho an'ny firy taona ahafahan'ny firenena mitoetra ao amin'ny lisitra nomena alohan'ny fankatoavana na ny fandavana ny fandaharana.
Hatramin'ny 2005, ny Departemanta Amerikana dia nitarika fifanakalozan-kevitra tamin'ireo firenena fantatra amin'ny anarana hoe "sarintany", izay liana amin'ny fidirana (na ny fiverenana) ny VWP. Amin'ireo firenena 19 tany am-piandohana, 10 dia tafiditra ao amin'ny VWP.
Azo atao ny miala amin'ny fahalalahana amin'ny fangatahana fahazoan-dàlana amin'ny fotoana rehetra. Mety hitranga izany raha mihevitra ny Amerikana fa ny olom-pirenena any amin'ny firenena sasany dia mety kokoa noho ny teo aloha handika ny fepetra VWP azy, toy ny fiasana tsy misy fahazoan-dàlana na mandresy ny fotoana ahafahana mipetraka any Etazonia. Araka izany, Arzantinany fandraisana anjara amin'ny VWP dia tapaka tao amin'ny 2002 noho ny olana ara-bola nitranga tany amin'io firenena io ary ny mety ho fiantraikany amin'ny fifindra-monina sy ny fandrobana tsy ara-dalàna ny olom-pireneny ao Etazonia noho ny VWP. UruguayNy fandraisana anjara amin'ny programa dia voavotra amin'ny 2003 noho antony mitovy. Raha ny politikan'ny firenena sy ny toekarena iray dia tsy mamaritra mivantana ny fahalalany, dia mino ny ankamaroany fa ny olom-pirenena eo amin'ny sehatra politika sy miorina eo amin'ny sehatra politika dia tsy hanana fanentanana be loatra amin'ny fikarohana asa tsy ara-dalàna sy mandika ny visa raha any Etazonia, mandinika ny fanekena na ny fandàvana visa iray. Isiraely dia tsy voalaza ao amin'ny VWP fa an-tapitrisa noho ny fanaraha-maso henjana ny Ireo Amerikana Palestiniana mandeha mankany Isiraely, ka tsy manatanteraka ny fepetra takian'ny fifanarahana.
The vondrona Eraopeanina dia nanery an'i Etazonia hanitatra ny Fandaharan'asan'ny Visa Waiver ho an'ireo firenena dimy sisa ao aminy izay tsy misy amin'izao fotoana izao: Bolgaria, Kroasia, Cyprus, Polonina, ary Romania. Ireo rehetra ireo dia "karatry ny sarintany" afa-tsy Kroasia, izay vao haingana no nanatevin-daharana ny Vondrona Eoropeana tao 2013. Tamin'ny volana novambra 2014 ny Governemanta Boligara dia nanambara fa tsy hanamarina ny Transatlantic Trade and Investment Partnership raha tsy najanon'ny Etazonia ny visa ho an'ny olom-pireneny.
Mitaky Visa ho an'ny Etazonia ve ny Olom-pirenena Eoropeana?
Olom-pirenena anglisy mandehandeha amin ' milina mpamaky na e-pasipaika, miaraka amin'ny miverina na tapakila tapakila, ary mijanona ho latsaky ny 90 andro, mendrika ho an'ny Visa Waiver Program ary afaka vice travel- tsy misy afa-tsy Rafitra elektronika ho an'ny fanomezan-dàlana mankany Travel (ESTA).
Manao visa amin'ny EU ve ny Amerikana Amerikana mba hiditra any Eoropa? Ny olom-pirenen'i Etazonia manana pasipaoro mendrika dia afaka mandeha Firenena mpikambana ao amin'ny 26 ny faritra Schengen ho an'ny 90 andro maromaro tsy mila mampihatra na mahazo Schengen fahazoan-dàlana ho an'ny fizahan-tany lavitr'ezaka na fiarahan'ny orinasa.
Hitsidika ireo olon-tianao, sa hody any Etazonia? Tsy maintsy mahazo ny fanomezan-dalana manokana avy amin'ny Governemantan'i Etazonia alohan'ny hidirana ao amin'ny firenena ianao. Ny tranga sasantsasany, izany dia midika ho fangatahana visa fa raha olom-pirenena ao amin'ny firenena ianao Visa Waiver Program (VWP), mampiasa ny Electronic System ho an'ny Famerenana ny Travel (ESTA) Mety ho mora kokoa sy haingana kokoa ny safidy.
Moa ve misy ESTA mendrika ho an'ny fitsangatsanganana maromaro?
ny IZAO Ny fanomezan-dalana dia amin'ny ankapobeny mendrika ho an'ny fitsangatsanganana maro mandritra ny roa taona (fanombohana ny daty izay ankatoavinao) na mandra-pandao ny pasipaoronao, na inona na inona tonga voalohany *. Midika izany fa raha mbola mahazo IZAO fanomezan-dàlana Travel, tsy voatery hiverina amin'ny fotoana mampanankery fe-potoana. Ny fepetra ESTA ao amin'ny Programa Visa Waiver (VWP) dia tsy dia mitaky loatra raha oharina amin'ny fampiharana elektronika tsy misy mpifindra monina. Ny fangatahana Visa dia mitaky ora iray na maromaro mba hamenoana ny fampahalalana momba ny dia sy ny tantara momba ny tenanao ary tsy maintsy miandry volana maromaro ianao vao hankatoavina. Vs. ny Fampiharana ESTA dia manodidina ny minitra 10.
Ohatrinona ny vidin'ny ESTA?
Noho ny fampiasana ny famerenana sy ny fanodinana ny $ 89.00 USD. Ny sandam-bola dia ahitana ny volan'ny governemanta Amerikana $ 14 (eo amin'ny £ 9) isaky ny olona, ​​ary tsy maintsy aloa amin'ny karatry ny carte de crédit. Raha nolavina ny fangatahanao, dia mitentina $ 4 fotsiny izy io. (izay voatondro ao amin'ny Lalàna fampiroboroboana ny Travel, 2009)
Inona no mihatra raha tsy mety ny ESTA anao?
Raha nandà ny fanomezan-dàlana ESTA ny mpandeha iray ary tsy niova ny toe-javatra nisy azy, dia hisy ny fangatahana vaovao koa. Mpivarotra tsy nahazoan-dalana amin'ny ESTA dia tsy mahazo mivezivezy amin'ny fandaharam-potoan'ny Visa Waiver Program ary tokony hangataka fahazoan-dàlana tsy misy fanavakavahana amin'ny a Masoivohon'i Etazonia na Consulat.
Mandra-pahoviana no handoavanao azy?
An Ny fampiharana ESTA dia momba ny iray (10) minitra folo minitra ary nomanina avy hatrany amin'ny aterineto. Ny ankamaroan'ny fangatahana dia ankatoavina ao anatin'ny minitra vitsivitsy. Na izany aza, misy ireo tranga izay mety hanemorana ny fanapahan-kevitra amin'ny fangatahana Ora 72. Izany no mahatonga ny mpamadika iray hamerenana ny fampiharana ny fampiharana tsara indrindra. Ny karaman'ny carte de crédit rehetra dia omena amin'ny ankapobeny. ESTAmerica dia afaka mandray ny hafa Ny safidy azo vidiana izay tsy ananan'i Etazonia an'i Amerika.
Atombohy ny fampiharana anio
Manomboha ny dia ataonao amin'ny ora 72
Manome ny fampiasana US E-File ESTA Passport haingana indrindra sy mora indrindra. Avelao ny fandefasana ny E-filing anareo hikarakara anao amin'ny alalan'ny fanontaniana ilaina ary ny ekipanay dia handinika ny fangatahanao alohan'ny handefasana izany any amin'ny Departemantan'ny Customs Amerikana. ESTAmerica dia voarakitra orinasa any Etazonia.
Mijanòna ao amin'ny loop rehefa misy fanavaozana ny fitsipika ESTA, Maniraka mailaka izahay mba hampahafantatra anao momba ny firenena sy ny programa Visa Waiver.
Eo am-pamindram-bola sy fitokisana
ESTAmerica dia sampan-draharahan'ny fizahantany fahatelo Customer service 24 / 7.
Tsy ny Governemanta Amerikana na ny mpiasan'ny fadin-tseranana isika.
MIEZAHA HATOKA ANTSIKA